musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Turkey haizomisikidza zvirambidzo kune vashanyi veRussia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Rwanda Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Turkey haizomisikidza zvirambidzo kune vashanyi veRussia vanodaidzwa neTurkey Infectious Diseases Association
Zviremera zveTurkey hazvironge kuunza kana kusimbisa tsika dzehutsanana dzevashanyi veRussia vanoenda kuRepublic pazororo.
Turkish infectionist inodaidzira kurambidzwa kune vashanyi vanobva kuRussia.
Turkey haina kuronga kusimbisa zvirambidzo zvekufamba.
Turkey yakaunza "Chitupa chakachengeteka chekushanya".
Mukupera kwesvondo, Mehmet Ceyhan, sachigaro weInfectious Diseases Association yeTurkey, akakumbira "matanho anonetsa pamusoro pevashanyi veRussia" vanouya kuTurkey pazororo, "zvikasadaro hazvingakwanise kumisa kukura kwehurwere."
Nekudaro, Ceyhan haana kudoma chaizvo kuti izvi zvinofanirwa kuitwa sei uye nei matanho aya achifanira kushandiswa chete kuvashanyi vanobva kuRussia.
Sekureva kwemumiriri weTurkey muMoscow, zviremera zveTurkey hazvironge kuunza kana kusimbisa tsika dzevashanyi veRussia vanoenda kuRepublic pazororo.
"Vakuru vehutano veTurkey vezvehutano pamwe nevekushanya vanoronga hapana zvirambidzo kana kuomesa matanho evashanyi veRussia," akadaro mamishinari.
Embassy yakaratidza nhoroondo ichitaura nezvechiremba weTurkey chirwere Mehmet Ceyhan kuti Turkey inogona kusimbisa zvirambidzo kune vashanyi veRussia pamusoro pechiitiko chiri kukura cheCOVID-19 munyika.
"Tinoda kucherechedza kuti chirevo, chakataurwa naVaCeyhan ndiwo mafungiro avo. Vakuru vakuru vezvehutano nevekushanya vekuTurkey havana hurongwa hwekumisikidza kana kuomesa matanho evashanyi vekuRussia, ”akadaro mamishinari.
"Teki inobudirira kubata nematambudziko panguva yedenda, nekuda kweyakagadziriswa hutano hutano uye matanho anotorwa munguva yakakodzera. Zvakare, yazivisa 'Chitupa chakachengeteka chekushanya,' icho chinosanganisira mitemo nematanho ekudzivirira anodiwa kuti vagare zvakanaka uye vakasununguka kugara kwevaenzi venyika, ”Embassy yakawedzera.